China cypb yakawanda disc disc feeder Kugadzira uye fekitori Chengxin Vibration Midziyo
CypB yakateedzana yakawandisa disc feeder iri mhando yevhoriyamu yekudyisa michina nekuenderera ichidyisa. Iyo yakaiswa mukuburitswa kwemidziyo yekuchengetera silo, silo uye bhakiti bhaini.
CypB yakateedzana yakawandisa disc feeder iri mhando yevhoriyamu yekudyisa michina nekuenderera uchipa. Iyo yakaiswa mukuburitswa kwemidziyo yekuchengetera silo, silo uye bhakiti bhaini. Inomanikidzwa neanoshanda mashandiro edisco feeder pasi pegiravhiti yezvinhu, uye inodyiswa mune inotevera kifaa ichienderera uye zvakaenzana. Kana yarega kushanda, inogona zvakare kutamba chinzvimbo chekukiya bin. Iyo inoenderera yekugadzira maitiro Kiyi michina.
CypB yakateedzana yakawandisa disc feeder rudzi rutsva rwe disc feeder ine kuvimbika kwakanyanya, kushanda kwakanyanya uye kuchengetedza simba, iyo yakagadzirirwa uye kugadzirwa nekambani yedu pahwaro hwekugaya uye hwekumedza ekunze tekinoroji yepamusoro uye kusanganisa nemamiriro chaiwo muChina. Izvo zvakapfuura uye zvine musoro muchimiro. Iine hunhu hunotevera:
1. Iyo michina inotora yakakura-dhayamita rotary rutsigiro chimiro, iine hukuru hwekutakura kugona uye kugadzikana kushanda.
2. Iyo yekufambisa michina inotora yakaoma zino pevhu giya kutapurirana, iyo ine yakakwira yekufambisa kunyatsoita uye hwakareba hupenyu hwebasa. Iyo yekudzora uye mota inoiswa pasi peiyo diski pamusoro, uye iyo yese michina chimiro iri compact.
3. Iyo michina inotora yakasarudzika yekuisa mucherechedzo chimiro, zvikamu zvekutapurirana zvakanyoroveswa uye zvakavharwa, uye hapana nyaya dzekunze dzinopinda muzvikamu zvekuzora, kuitira kuona kuti michina inogona kushanda pasina mhosva.
4. Iyo frequency kutendeuka yekumhanyisa mirawo inotora iyo flux vector frequency shanduko yekudzora modhi, iyo ine hombe yekutyaira torque, yakafara gadziriso renji uye yepamusoro kutonga kwakaringana.
5. Chimiro chakazara chakapoteredzwa chinogamuchirwa mune inoendesa zvinhu, zvinoenderana nehutsanana manejimendi pane ino saiti uye inogadzira nzvimbo yakanaka yekushanda.
6. Iyo modular uye inowoneka dhizaini inogamuchirwa yemidziyo muviri uye yekuvhara ruoko ruoko kuti uone kukurumidza kubvisa diski uye gungano panzvimbo. Iyo yekumisikidza chinzvimbo cheiyo nzira yekutengesa inogona kusarudzwa pamadiro mukati me180 degrees, izvo zvinoita kuti zvive nyore kushandisa.
Performance dhayamita dhayamita Kuburitsa t / h Kuenzanisa chiyero bandwidth mm
CYPBφ1600 10 kusvika 100 650
CYPBφ2000 20- 200 800
CYPBφ2800 40 - 400 1200
CYPBφ3200 60 - 600 1500
Pashure: Bhandi, cheni feeder
Zvadaro: Czg yakapetwa kaviri misa vibrating feeder
Yakavharwa Disc Feeder
Disc Rinopa Mugadziri
Disc Rinopa Mufananidzo
Disc Rinopa Mutengo
Kuwanda Disc Anopa
Vertical Disc Rinopa